Nkọwa nke Samsung Galaxy A8 ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Nkọwa nke Samsung Galaxy A8 ọhụrụ
Agbanyeghị na izu ole na ole gara aga, ọ dịka ọ bụ naanị na anyị na-ebipụta akụkọ banyere Galaxy Note 7 na-esote nke a ga-ewepụta na Tuesday na-esote, August 2 na New York na ọmarịcha ahịa ndị Galaxy S7 nwere, nke mere ka ụlọ ọrụ Korea laghachi na ụzọ nke uru, ngwaọrụ ndị a Ọ bụghị naanị ha ka ụlọ ọrụ Samsung ahụ zubere ire n'afọ a.
Samsung amarala mgbe niile gbasara ịnwa ikpuchi mkpanaka ekwentị niile dị na ahịa, site na nke dị ala ruo na nke kachasị elu, mana nwa oge ugbu a, n'ihi ihe gbasara akụ na ụba ahapụla usoro dị ala ilekwasị anya naanị n'etiti, elu-etiti na elu elu. Ngwaọrụ na-esote nke ga-ada n'ahịa ahụ, na-agụtaghị 7, ga-abụ Galaxy A8, nke dị n'etiti njedebe dị ka anyị hụworo mgbe anyị hụrụ nkọwa ya.
Dabere na nseta ihuenyo ọhụụ nke Geekbench bipụtara, Galaxy A8 na-esote ga-abịa na ihuenyo 5,1 nke anụ ọhịa na mkpebi 1080p, Exynos 7420 asatọ isi ihe nhazi nke ụlọ ọrụ Korea rụpụtara, Mali T760 GPU, 3 GB nke RAM., A n'azụ nke 15 mpx na n'ihu 4,7 mpx na nchekwa dị n'ime nke ga-amalite na 32 GB. Njedebe lga-eji gam akporo 6.0.1 kụrụ ahịa kama nke kachasị ọhụrụ nke gam akporo 7 Nougat nke ga-ada n'ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ.
Banyere ọnụahịa ahụ, ịbụ ọnụ anyị nwere ike ịtụgharị uche na ngalaba dị elu, ọ nwere ike ịbụ n'etiti 300 na 400 euro, dịtụ n'okpuru Galaxy A9, nke anyị nwere ike ịchọta n'ahịa maka ọnwa ole na ole. Dị ka ọ dị na mbụ, anyị amaghị ụbọchị ebumnuche a na-atụ anya nke mba ebe ọ ga-adị na mbụ, mana ihe niile yiri ka ọ na-egosi na njedebe a agaghị adị n'ụwa niile opekata mpe na mbido ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkọwa nke Samsung Galaxy A8 ọhụrụ
Mgbe ọnwụ nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ihi ngwaahịa dara ogbenye dị ka s6 ihu gbakwunyere nke nwere nsogbu akara, nke akara ahụ anaghị azaghachi, ha ga-agba mbọ n'ihi na ha atụkwasịghịzi ntụkwasị obi na na azụmaahịa a adịghị mma.
Nwere ike ịzụta robot Pepper na Spain ma ọ na-efu ihe karịrị 20 puku euro